डा. गोविन्द केसीले जुम्लाको मन्दिरमा शुरू गरे १९ औं अनशन
डा. गोविन्द केसीले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ रानीचौरमा १९ औं सत्याग्रह शुरू गरेका छन् ।
केसीले बनबिरा मष्टोको थानको मन्दिर परिसरबाट १९ औं सत्याग्रह शुरू गरेका हुन् ।
आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेर डा. केसीले अनशन शुरू गरेका छन् । यसअघि उनले १६ औं सत्याग्रह पनि जुम्लामा गरेका थिए । पहिलेको सत्याग्रहका बेला गरिएका सम्झौता हालसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आफू अनशन बस्न बाध्य भएको बताए ।